Fil d'actualités du 18/02/2019
18/02/2019 - 19:00 : LOZA MAHATSIRAVINA: Olona miisa 2 no voafaokan'ny fiara teny Marais Masay tokony ho tamin'ny 6ora hariva teo, ka ny iray maty tsy tra-drano ary ny iray naratra mafy.
18/02/2019 - 12:00 : TOETR'ANDRO: Misy andian-drahona matevina ao amin’ny lakandranon’i Mozambika izay mitondra orana betsaka sy rivotra mahery mety hahatratra 45 Km/ora ary mety hihoatra ny 60Km/ora indraindray any amin’ny faritra Melaky, Menabe, Atsimo Andrefana ary Androy.
18/02/2019 - 11:30 : FONJAN'I TSIROANOMANDIDY: Mitsahatra ao anatin'ny fotoana tsy voafetra ny fahafaha-mamangy ao amin'ny fonjan'i Tsiroanomandidy taorian'ny fahavakian'ny fonja omaly alahady.
18/02/2019 - 11:00 : ERIC FOU'HEHY: Tsy mbola nodidiana izy satria mbola mila vola 75 000Euros ny fanatanterahana izany.
18/02/2019 - 10:30 : SMM: Ny mpitsara Clément Jaona no voafidy ho filohan'ny Sendikan'ny Mpitsara eto Madagasikara na ny SMM.
18/02/2019 - 10:00 : ANDOTIANA: Higadona an-tanindrazana ny zoma 22 febroary ny nofo mangatsiakan'ity tovovavy Malagasy 23 taona nanjavona iray volana teo ho eo tany Frantsa ary hita faty ity, ka ny fanjakana no hiantoka manontolo ny lany.
18/02/2019 - 09:30 : HERINANDRON'NY ANGOVO: Eny amin'ny Hôtel PANORAMA, manomboka androany faha-18 hatramin'ny zoma faha-22 febroary ny fanamarihana izany.
18/02/2019 - 09:30 : MAROTSOPOY ANJOZOROBE: Olona 4 no efa matin'ny dahalo tao antin'ny fanafihana nisesy ary basy 4 no very ankoatran'ny omby maro.
16/02/2019 - 20:00 : TSIROANOMANDIDY:Vaky ny tolakandro tokony tamin'ny 4 ora teo ny fonjan'ny Tsiroanomandidy. Raha ny vaovao voaray vonjimaika hatreto dia voafonja am-polony no tafatsoaka. Ny roa tamin'ireo gadra ireo kosa efa voasambotra.
15/02/2019 - 11:00 : MOPERA VOATIFITRA: Nodimandry androany maraina i Mopera Nicolas isan'ireo voatifitra teny Mahitsy nandritra ny fanafihan-jiolahy tamin'ny herinandro ambony.
Archive du 20180621
Kianjan’ny 13 mey Tsy miato ny tolona na dia somparana aza…
Tonga maro ny vahoaka teny amin’ny Kianjan’ny 13 mey omaly, na nisy aza ny fisintahana tsy an-kiera nataon’ny MAPAR.
Mpitondra malagasy Miharihary ny fitiavan-tseza tafahoatra
Ny fiambenana ireo minisitera hiadidian’ireo minisitra HVM miisa 14 izay takiana alana amin’ny toerany indray izany izao no vaindohan-draharahan’ny fitondram-panjakana Malagasy.
Ntsay Christian Efa filohan’ny tetezamita ?
Diplomaty maromaro indray no noraisin’ny praiminisitra Ntsay Christian omaly, ka nivoitra tao anatin’izany ny fahavononan’ireo vahiny amin’ny fanohanana an’i Madagasikara, indrindra fa ny fanatontosana fifidianana.
Fandaminana anaty minisitera Hiteraka fitarazohan’ny asa fampandrosoana
Mahakely finoana ny toe-draharaha misy eto Madagasikara. Raha izao mantsy no mitohy dia mbola ho lavitry ny afo ny kitay. Tena mbola ho ela vao ho tratra ny tanjona ho fampandrosoana ity nosy ity.
Fahaleovantena sy fitiavan-tanindrazana Tsy fiankinan-doha amin’ny vahiny no dikany ho an’ny sarambabem-bahoaka
Homarihina amin’ny talata 26 jona ho avy izao ny tsingerin-taona faha-58 nahazoantsika ny fahaleovantena.
Hajo Andrianainarivelo “Tsy ekena holalaovin’antoko politika 3 ny firenena”
Ny 8 jona lasa teo no nandrenesana farany an`i Hajo Andrianainarivelo, filoha nasionalin`ny antoko Malagasy Miara Miainga, nandritra ny fangataham-panazavana ny fifanarahana ara-politika teny amin`ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana (HCC) etsy Ambohidahy.
Ramtane Lamamra Mpandamina sa mpanakorontana ?
Sesilany ny fanelanelanana nataon`ny sehatra iraisam-pirenena teto amintsika nandritra ny fihetsehem-bahoaka nanomboka ny 21 aprily.
Depiote Mapar namadika tolona Ho sahirana amin’ny fifidianana manaraka eo
Samy niandrandra ny tolona ho an`ny fanovana ny rehetra tetsy amin`ny kianjan`ny 13 mey.
Sehatry ny fizahantany Mbola betsaka ireo olana tsy maintsy harenina
Mbola betsaka ireo olana eo amin’ny sehatry ny fizahantany tsy maintsy arenina eto Madagasikara. Anisan’ny tena nampitaraina ireo Malagasy monina any ivelany sy ireo vahiny tonga tetsy amin’ny Carlton Anosy,
Rallye Nankang Asacm 2018 Mpifaninana 47 no hanainga eny Imerinkasinina rahampitso
Ny rallye Nankanga Asacm 2018 izay karakarain’ny klioba Asacm miaraka amin’ny tohan’ny Fmmsam hotontosaina ny 22, 23 ary 24 jona izao amin’ny lalana Ambohimanambola, Anjeva, Masindray,
Basket-Ball Malagasy Hotontosaina miaraka eny Ankatso ny 3X3 sy 5x5
Raikitra indray ny fifaninanana nasionaly Basket 3X3 "ASIO TELO ANY E" sokajy Sénior lehilahy sy vehivavy ary sokajy U 14 zazalahy sy zazavavy 2018 hotontosain’ny FMBB eny amin’ny kianja mitafon’Ankatso amin’ny sabotsy 23 sy alahady 24 jona 2018 izao ka rahampitso zoma 22 jona tolakandro no hanatanterahana ny fivoriana teknika etsy amin’ny foibe toeran’ny FMBB etsy 67 ha Atsimo.
Mondial 2018 Famintinana ny herinandro nifaninanana
Herinandro katroka anio alakamisy 21 jona izay no nanombohan’ny Mondial 2018 tontosaina any Rosia. Lalao 20 izay no vita ary baolina niisa 45 no tafiditra tamin’izany ka ny 3 tamin’ireo dia penality azo tamin’ny VAR na ny « Arbitrage vidéo ».
Nifamono ny mpivaro-mandeha ka tao anatin’ny maizina no nisehoan’izany. Miara-mipetraka ao amin’ny efitrano iray hofain’izy ireo miaraka ny olona avy any Ambatolampy.
Madagasikara Ny 40 %-n’ny ankizy no miasa alohan’ny faha-18 taonany
Miisa iray miliara ireo zaza roa ka hatramin’ny 17 taona no fantatra fa hiharan’ny herisetra maneran-tany ka tafiditra ao anatin’izany ny fampiasana azy ireo mialoha ny faha-18 taonany.
Fampitoniana ny fanaintainana Efa manana ivontoerana afaka mandray izany i Madagasikara
Tsy misy aretina tsy mandalo fanaintainana. Saika miaina sy misedra izany avokoa ny marary rehetra, antony nijoroan’ny ivontoeram-pirenena misahana ny fanaintainana etsy amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha.
Fampandrosoana ny toekarena Ilaina fifehezana mafy hahatrarana ny tanjona
Mitohy hatrany ny fahapotehan’ny toekaren’i Madagasikara. Tsy mbola milamina ny savorovoro politika misy ary hita ho mitohy hatrany ny grevy sy ny tsy fanekenan’ireo sendika maro ireo minisitra sasantsasany napetraka.